Izivinini ezimbili lapho ukuguquguquka kwesimo sezulu kuqhubekela phambili | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izivinini ezimbili zokushintsha kwesimo sezulu
Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunezivinini ezimbili: esisodwa lapho imiphumela eyinhlekelele emvelweni, kubantu nakwimithombo yemvelo ikhula; futhi enye, lapho izingxoxo zokunqanda lolu thando kwisimo sezulu somhlaba ziyathuthuka.
Ngoba kuyadingeka ukuguquka kwemvelo namandla Ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu, iziphi izinguquko okufanele sizibheke ngokushesha okukhulu, uma sifuna inhlekelele ingafiki?
1 Izwe lenguquko
2 Amandla avuselelekayo ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu
3 Ukuthuthuka kokuguquka kwesimo sezulu
Esikhathini sokuqala, abantu bashiya itshe ukuze baqhubekele phambili ensimbi futhi, empeleni, abenzanga kanjalo ngoba itshe lalivame. Ngamanye amagama, kulezi zinsuku, abantu akudingeki balinde uphethiloli wezinsalela ukuze uphele ukuze bashintshele emandleni avuselelekayo. Ukuguqulelwa kwamandla kuya emandleni ahlanzekile asiza ku- ukuncishiswa kwamagesi abamba ukushisa Kumele kusheshe, noma okungenani, esikhathini esiyiminyaka embalwa, ngoba, uma kungenjalo, ubuntu buzongena ezinkingeni ezingalungiseki nezingalindelekile.
Izinguquko zobuchwepheshe ezenziwa ngabantu azibangelwa njalo ukuphela kwezinto zokusetshenziswa, kepha kungenxa yokuthi okunye kungcono futhi kushibhile. Isikhathi somlilo kufanele siphele ngokushesha okukhulu uma sifuna ukubona ikusasa. Ososayensi abaningi bathi ingxenye enkulu yamafutha ezimbiwa phansi kufanele ihlale ingaphansi komhlaba uma sifuna ukuvimbela imiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu ekubeni yinhlekelele enkulu kakhulu.
Ezindaweni ezinjengeFrance ukuhlola uwoyela negesi sekuvele kuvotelwe, okungukuthuthuka kokushintshwa kwamandla. Kodwa-ke, ukulahla izinto zokubasa ezimbiwa phansi akulula. Empeleni, izinto zokubasa ezimbiwa phansi ziyisisekelo samandla ahambisa umhlaba futhi ukuguqula lokhu kunzima kakhulu futhi kuyinselele.
Kungani amandla wezinsalela eyingozi kangaka uma edalwe yimvelo uqobo? Yebo, lapho uphethiloli ushiswa, kukhishwa inani elikhulu lesikhutha elikhishwa emkhathini. Le gesi iyakwazi ukugcina ukushisa emoyeni futhi ivimbele iplanethi ekukhululeni ukushisa okushiwo, ikhuphule amazinga okushisa aseplanethi. Lapho lokhu kuguquka kwesimo sezulu sekushintshiwe, ukusebenza kwemvelo kuyahluka futhi akufani. Ngale ndlela, amaphethini wokusebenza kwezimo eziningi zesimo sezulu njengemvula, umoya kanye neziphepho kuyashintshwa.
Amandla avuselelekayo ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Izindaba ezimnandi ukuthi, ngenhlanhla, imvelo iphinde inikeze amandla angenamkhawulo futhi ayingcolisi imvelo. Imayelana namandla avuselelekayo. Ngokuyisisekelo, amandla omoya namandla elanga yilawo akwazi ukuba nenye indlela ezimakethe, ngoba angathuthukisa izinhlelo zokugcina ugesi, ngokuzayo, ezingathatha indawo yezibaseli.
Izithunywa zamazwe acishe abe ngama-200 zixoxisane amasonto amabili ukuthi iSivumelwano SaseParis kufanele sithuthukiswe kanjani, esasivaliwe ngo-2015 futhi esesivele siyasebenza, kodwa izinyathelo zaso ezingeke zisetshenziswe kuze kube ngu-2021, lapho i-Protocol of I-Kyoto Kulesi sikhathi sokugcina ingqungquthela yesimo sezulu eBonn inqubekelaphambili seyenziwe ngemithethonqubo Yesivumelwano SaseParis. Kodwa-ke, izinga elenza ngalo lokhu lihamba kancane kunezinga ama-alamu wesimo sezulu aqala ngalo. Okusho ukuthi, konke okuvunyelwene ngakho eBonn ngeke kuvunyelwe kuze kube nengqungquthela yesimo sezulu elandelayo.
Ukuthuthuka kokuguquka kwesimo sezulu
Njengoba kushiwo ngaphambili, kunezivinini ezimbili lapho ukuguquka kwesimo sezulu kuqhubeka khona. Okushesha kakhulu lokho yizinguquko ezenzeka kwesimo sezulu emhlabeni wonke ngenxa yemiphumela yabantu esintwini. Ukuhamba kancane kwalezi zingxoxo obekuqhubeka ngazo isikhathi esingaphezu kwamashumi amabili eminyaka kuqhathaniswa namandla nokuphuthuma kwama-alamu ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Kwimibiko ekhishwe ngu i-World Meteorological Organisation (WMO) Amarekhodi amasha asethwe ekuhlolweni kwe-CO2 yomhlaba, kepha, izinga lapho izingxoxo zizama ukumisa ukukhishwa okunjalo lihamba kancane.
Kumele sinyuse ngokushesha isivinini nokulangazelela lapho kufanele kufezeke khona izinhloso uma sifuna ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu ngesikhathi nokuthi lo mjaho ungasinqobi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izivinini ezimbili zokushintsha kwesimo sezulu
Imiphumela yesomiso eSpain
Ngubani ozobhekana nemiphumela emibi kakhulu yokuguquguquka kwesimo sezulu?